Ascent Capital မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းအင်တာနက်၀န်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Frontiir ကုမ္ပဏီတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း - Ascent
Ascent Capital မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းအင်တာနက်၀န်ဆောင်မှု…
စင်္ကာပူ၊ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ(၂၄)ရက်၊ – စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ငွေကြေးစီမံ ခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် Ascent Capital Partners Pte. Ltd. (“Ascent Capital”) မှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၄င်း၏ ပထမဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက် Ascent Myanmar Growth Fund I LP (“AMGF”)မှ တဆင့် ပြုလုပ်ကြောင်း ယနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ AMGF မှ ဦးဆောင်၍ စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၂၆)သန်းကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ Frontiir Pte. Ltd. (“Frontiir”)တွင် ရှယ်ယာအနည်းစုအနေ ဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပါသည်။
Ascent Capital တည်‌ထောင်သူနှင့် Managing Partner၊ Mr. Lim Chong Chong မှ ယခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ “ဆက်သွယ်ရေး၊ မီဒီယာနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာကဏ္ဍတို့သည် ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှ ဦးစားပေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမည့် အဓိကကဏ္ဍ များဖြစ်ပါသည်။ အင်တာနက်သည် လူနေမှုဘဝများနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် လိုအပ်သောဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲဈေးကွက်အတွက် ပို၍လိုအပ်သည်ဟု ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်သဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံဆက်သွယ်ရေးနှင့် မီဒီယာကဏ္ဍ၏ ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Frontiir တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏ ရပ်တည်ချက်ဖြစ်သည့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် အောင်မြင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပေါ်ပေါက်လာစေရန် ပံ့ပိုးနိုင်ရုံသာမက အများ ပြည်သူများ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် အသုံးပြုရန် အထောက်အကူဖြစ်စေသည့်အတွက် နိုင်ငံတိုးတက်ရေးကိုလည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အကျိုးပြုရာ‌ရောက်ပါသည်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်‌ထောင်ခဲ့သည့် Frontiir သည် ယခုအခါတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီး မားဆုံး အင်တာနက်ဒေတာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်တည်ရှိနေပြီး Myanmar Net အမည် ဖြင့် သုံးစွဲသူပေါင်း (၁.၆)သန်း၊ အိမ်ထောင်စုပေါင်း(၃၆၀၀၀၀)ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက် ရှိပါသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် Frontiir သည် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ ပဲခူးနှင့် မော်လမြိုင်တို့တွင် အင်တာနက်ကွန်ယက်ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသည်။ ၄င်း၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည့် မြန်မာ နိုင်ငံသားတိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို တန်းတူညီမျှအသုံးချနိုင်ရေးနှင့် ဈေးနှုန်းသက်သာ သော အင်တာနက်ရရှိစေရေးတို့အတွက် ဝန်ဆောင်မှုများကို နိုင်ငံတဝှမ်းသို့ ဆက်လက်ချဲ့ ထွင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ Frontiir တွင်ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမှ အထင်ကရ အဖွဲ့အစည်း များဖြစ်သည့် ယူကေအခြေစိုက် CDC Group၊ ဂျပန်အခြေစိုက် Daiwa PI နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အခြေစိုက် Delta Capital တို့မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပါသည်။
Frontiir ၏ ဥက္ကဌနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဒေါက်တာဝေလင်းထွန်း(ခ)Dr. Godfrey Tan မှ “Ascent Myanmar Growth Fund ၏ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပထမဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ Frontiir ဖြစ်သည့်အတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူပြီး AMGF အဖွဲ့သားများကို နွေးထွေးစွာကြိုဆို ပါသည်။ ယခုလို Covid 19 ကပ် ရောဂါကာလတွင် AMGFကဲ့သို့ အထင်ကရအဖွဲ့အစည်းမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ရရှိခြင်းသည် Frontiir ၏ ခိုင်မာသည့် စီးပွားရေးကျင့်ဝတ်ကို ဖော်ကျူးရုံ သာမက ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပိုမိုဖန်တီးပြီး နိုင်ငံအတွက် အကျိုး သက်ရောက်မှုကောင်းများစွာကို ဖန်တီးပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် Frontiir ၏ စံနှုန်း ဖြစ်သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း တန်းတူညီမျှစွာအသုံးချနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ချက်များ ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ရေရှည်တွင် အကျိုးသက်ဆိုင်သူများ၏ တန်ဖိုးကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ AMGF ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ထပ်လောင်း ရရှိမည့် CSR ရန်ပုံငွေတို့ဖြင့် နိုင်ငံ၏ဝင်ငွေနည်းပါးသည့် ဒေသများတွင် အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုကို အများပြည်သူ၀ယ်ယူအသုံးပြုနိုင်မည့်ဈေးဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် ဆောင် ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်“ ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Frontiir တွင် AMGF ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပြင် Ascent Capital ၏ Ascent CSR Fund မှ ရန်ပုံငွေအချို့ကို Covid 19 ကြောင့် စီးပွားရေးထိခိုက်မှုကို လျော့ချရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက်လည်း စီမံထားပါသည်။ Frontiir မှတစ်ဆင့် ဤရန်ပုံငွေကို အသုံးပြု၍ ကျားမတန်း တူညီမျှမှုရှိရေး၊ အရည်အသွေးမြင့်ပညာရေးကို တန်းတူညီမျှစွာရရှိရေးနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်း ပညာကို မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း တန်းတူညီမျှစွာအသုံးချနိုင်ရေးတို့ကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Covid 19 ကပ်ရောဂါကြောင့် Frontiir ၏ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ဝယ်လိုအား များ ပိုမိုတိုးတက်လာပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှ ထုတ်ပြန်ထားသော Covid 19 စီးပွားရေး ထိခိုက်မှုသက်သာရေးစီမံချက်တွင်လည်း E-commerce ကို ဦးစာပေးအနေဖြင့် လုပ်ဆောင် ရန်ထည့်သွင်းထားပြီး လက်လီလုပ်ငန်းများကို အွန်လိုင်းအသုံးပြု၍ ကုန်သွယ်မှုပြုရန် တိုက်တွန်းထားသလို ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းများအတွက် E-commerce စီးပွားရေးစင်္ကြံတစ်ခု တည်ဆောက်သွားမည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ “အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်လုပ်ငန်း အနေဖြင့် Frontiir သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာသို့ ကူး ပြောင်းရာတွင် နိုင်ငံ၏ယုံကြည်အားထားရသော အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ရပ်တည်သွား မည်”ဟု Mr. Lim မှ ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးလမ်းပြမြေပုံတွင် စီမံကိန်း နှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အချက်အလက်များအရ နိုင်ငံလူဦးရေ၏ ၄၀% သာ အင်တာနက် အသုံးပြုသည်ဟု ဖော်ပြထားပြီး ၂၀၂၀ခုနှစ်တွင် အင်တာနက်အသုံးပြုသူ အရေအတွက် ၄၅%၊ ၂၀၂၅ခုနှစ်တွင် ၅၀% အထိ တိုးတက်နိုင်ရန် မျှော်မှန်းထားကြောင်း ထိုလမ်းပြမြေပုံတွင် ဖော် ပြထားပါသည်။
၂၀၂၀ပြည့်နှစ် မေလတွင် နိုင်ငံ၏ပျမ်းမျှ fixed broadband အင်တာနက်ဒေါင်းလုဒ်မြန်နှုန်းမှာ 18.0Mbps ရှိပြီး ၂၀၁၉ခုနှစ် မေလနှင့်နှိုင်းယှဥ်လျှင် မြန်နှုန်း(၂၉.၃%) တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပျမ်းမျှဒေါင်းလုဒ်မြန်နှုန်းဖြစ်သည့် 63.85Mbps နှင့်ယှဥ်လျှင် နိုင်ငံ၏မြန်နှုန်း မှာ နိမ့်ကျလျက်ရှိသော်လည်း ၂၀၁၃ခုနှစ်တွင်မှ နိုင်ငံ၏ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဖြေလျော့ ပေးခဲ့သည်ကို ထောက်ရှုလျှင် အပြုသဘောဆောင်သည့် တိုးတက်မှုဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံ အတွင်းတွင် fixed broadband သုံးစွဲသူအရေအတွက်လည်း နည်းပါးသေးသော်လည်း Frontiir သည် broadband အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးရာတွင်လည်း ဈေးကွက်အတွင်းတွင် ဦးဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည့် AMGF သည်မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက် private equity fund ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ စားသုံးသူနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ဆောင်မှု၊ ကျန်းမာရေး၊ နည်းပညာ၊ မီဒီယာ နှင့် ဆက်သွယ်ရေးအစရှိသည့် ကဏ္ဍများမှ ကုမ္ပဏီများတွင် အဓိကထား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ AMGF ကို ကမ္ဘာတဝှမ်း နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်ရာ၌ အောင်မြင်မှုမှတ်တမ်း ကောင်းများ ရရှိထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုမ္ပဏီများနှင့် ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှ ပါဝင် ရင်းနှီးထည့်ဝင်မြှုပ်နှံထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အအောင်မြင်ဆုံး ကုမ္ပဏီများအနက်မှ တစ်ခုဖြစ်သည့် Grand Royal ဝီစကီအမှတ်တံဆိပ် ထုတ်လုပ်သည့် Myanmar Distillery Company (“MDC Group”)၏ တည်ထောင်သူနှင့် တွဲဖက်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဦးအောင်မိုးကျော်၊ MDC Group ၏ တွဲဖက်တည်ထောင်သူ နှင့် Asia Resource Corporation ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ Mr.Tony Chew တို့ဖြစ်သည်။ Temasek ၊ အာရှ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (“ADB”) နှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ JG Summit Holdings တို့မှလည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပါသည်။
 Overcoming as One: COVID-19 Economic Relief Plan-CERP. (2020, April 27). Retrieved June 12, 2020, from https://www.moi.gov.mm/moi:eng/?q=news/28/04/2020/id-21511
 Digital Economy Development Committee. (2019). Myanmar Digital Economy Roadmap. Retrieved from https://myanmar.gov.mm/documents/20143/9096339/2019-02-07+DEDC+RoadMap+for+Websites.pdf/
3 Republic of the Union of Myanmar’s Mobile and Broadband Internet Speeds. (2020, May). Retrieved June 17, 2020, from https://www.speedtest.net/global-index/republic-of-the-union-of-myanmar
4IN-DEPTH ANALYSIS OF CHANGES IN WORLD INTERNET PERFORMANCE USING THE SPEEDTEST GLOBAL INDEX. (2019, September 4). Retrieved June 12, 2020, from https://www.gsma.com/membership/resources/in-depth-analysis-of-changes-in-world-internet-performance-using-the-speedtest-global-index/
PreviousPrevious post:Ascent Capital Makes Investment into Frontiir, Leading Internet Service Provider in MyanmarNextNext post:Myanmar-focused PE Ascent Capital leads $26m funding in Frontiir in debut deal